Maitiro: izvo zvikuru zvinoshamisa paunodzoka kubva kuzororo | Ehupfumi Zvemari
Kudzoka kwemazororo kune zvakawanda zvakashamisa zvakachengeterwa zvido zvevashambadzi vadiki nepakati uye izvo zvinogona kuvakurudzira gadzirisa yako portfolio yekudyara kwekota yechitatu yegore. Gore rino kwave nezviitiko zvakawandisa muna Nyamavhuvhu kuti vachinje kukosha kwemitengo yavo iwe paunenge uri kumahombekombe kana imwe nzvimbo yekutandara uye yekuzorora. Nenzira iyi, hapana mubvunzo kuti kudzoka kwezororo uku kuchakuunzira zvinopfuura kamwe kushamisika.
Mwedzi waNyamavhuvhu wegore rino wave unoshamisa uye chokwadi ichi chaendeswa kumisika yemari. Kunyanya, mune akateedzana ematokisi akasangana ne simba rakasimba kwazvo uye nechisimba kupfuura zvakajairwa. Kana iwe ukaiswa mari mumakambani aya, hauzove neimwe sarudzo kunze kwekushandura marongero ako ekudyara kana iwe uchida kuti kuchengetedza kwako kubatsire kubva ikozvino.
Mune zvimwe zviitiko, iwe unozviwana iwe uine yakaderera zvakanyanya stock kukosha kupfuura usati waenda pazororo rako rakamirirwa kwenguva refu. Kunyangwe iwe usingafunge kuti iwo chaiwo emabhizimusi mikana, asi pane zvinopesana iwo anga ari iwo mhedzisiro yezviitiko izvo varimi vasina kutarisira, ndoda muzhizha rino. Zvese izvi, panguva iyo iyo Dow Jones yakarova zvekare nguva dzayo-dzese kusvika kushamisika kwevakawanda vadiki nepakati varimi. Nenzira inoenderera kubva 2010 pakapera dambudziko rezvehupfumi uye apo varimi vakaita mari yakawanda mukushanda kwavo pamusika wemasheya.
1 Mahoridhe: ACS yakadzikira
2 BBVA pasi pechiratidzo cheTurkey
3 Inditex yakafumurwa zvakanyanya kuTurkey
4 IAG uye kukwira kwemutengo wemafuta asina kuchena
5 Vashanyi vanokoshesa pasi
Mahoridhe: ACS yakadzikira
Iyo kambani yekuvaka yakasiiwa mumwedzi waNyamavhuvhu dzinenge 5% semhedzisiro yechiitiko chakaitika muguta reItaly reGenoa. Hazvishamisi kuti iye ishamwari yemubatsiri wemugwagwa mukuru paive nezambuko rakadhirika. Zvichipa izvo zvinogona kuitika, hazvigone kutongwa kunze kuti mutengo wezvikamu zvawo unogona kudzikira mumavhiki anotevera. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yehunhu hwauchazoona shanduko zhinji kubva muna Chikunguru. Kusvika padanho rekuti zvichave zvakafanira kugadzirisa hurongwa hwekudyara, chero chaunoshandisa panguva ino.
BBVA pasi pechiratidzo cheTurkey
Zvisinei, nhau hombe dzegore chave chiri icho dambudziko rezvemari yakagadzirwa muTurkey uye zvakatungamira zvikamu zvebhangi reSpain kurasikirwa chikamu chakakosha kwazvo chekukosha kwavo pamusika wemasheya. Kana iwe ukaiswa mari mune ino stock stock chikumbiro, hapana mubvunzo kuti iwe uchave uine kushamisika kukuru paunodzoka kubva kuzororo rako. Uye zvechokwadi haina kunaka kwazvo asi zvinopesana iwe uchaedza kutsvaga mhinduro yekugadzirisa chiitiko ichi mumisika yemari. Nekuti idambudziko riri kure nekuguma, asi nekusiyana, rinogona kuwedzera chero nguva.
Inditex yakafumurwa zvakanyanya kuTurkey
Kumwe kwekushamisika kukuru munguva ino vanga vari varairidzi vekambani yemachira nekuda kwekuratidzwa kwayo kune nyika yeOttoman uye izvo zvinogona kutungamira kudzikiswa patsva mumitengo yavo. Zvisinei, yanga iri imwe yeiyo tsika dzakanyanya kurangwa yemari munguva ino yezororo, nekuderera kuri pamusoro pe3%. Hazvishamise kuti chokwadi chakakosha ichi chinogona kukanganisa chirevo chemari yekambani yeGalician. Nenjodzi yekudzikira kutsva uye kune simba mukukoshesa kwemitengo yavo. Chero zvazvingaitika, haisi yakanakisa nguva yekutora zvinzvimbo mune chimwe chakakosha bhuruu machipisi pamusika weSpanish wemusika.
IAG uye kukwira kwemutengo wemafuta asina kuchena
Uye hazvikanganwike kuti mukati memwedzi waNyamavhuvhu paive nekuwonekwa kwakakosha mumutengo wemafuta. Uye chimwe chevakakundikana zvikuru veiyi maitiro iboka renhandare yendege IAG izvo zvakaona kukura kwayo kutarisira kwemwedzi iri kuuya kwakatadza mumavhiki ano. Asi mune zvese, ndeimwe yetsika idzo dzinofanirwa kutariswa mukudzoka kwemazororo nekuti ine nzira refu yekudzika kana ichifamba mune ipfupi nepakati nepakati bearish chiteshi.
Chaizvoizvo kupesana kwechiitiko chakapihwa ne mafuta makuru wenyika. Nerwendo rwekumusoro kana goridhe nhema rikaramba riine maitiro akafanana kusvika zvino. Mune izvo zvave chimwe chezvishoma zvakanaka zvinoshamisa zhizha rakaoma iri ratakaita gore rino. Nemitengo yakanangwa pamusoro pemitengo yazvino yavanounza mumisika yemari. Chero zvazvingaitika, iko kukosha kwekutora chikamu muchikamu chekupedzisira chegore.
Vashanyi vanokoshesa pasi
Imwe yevakakundwa zvikuru zhizha rino ndivo vanonzi tsika dzevashanyi. Icho chikonzero chinofanirwa kuwanikwa mukudonha kwevashanyi kuenda kuSpain, iyo yakadzikiswa neinenge 3%. Chinhu chakashandiswa nevashambadzi ku buda munzvimbo dzavo. Nekuderera kunoshamisa kwemitengo muna Nyamavhuvhu uye kunyangwe hazvo yaive yeimwe yemaitiro akakurudzirwa nevanoongorora zvemari. Mune kufamba kunogona kutungamirwa kune yakakwira nguva uye kuti kumwe kudzikira kwekuyerera kwevashanyi kunotarisirwa kubva zvino zvichienda mberi.
Nenjodzi huru yekuti iwe unogona kurasikirwa nechikamu chemari yakachengetwa. Hazvishamise kuti parizvino iri kirasi yemasheya ari kuratidza humwe hutera uye haana simba remakore apfuura. Kusvika padanho rekuti chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari vakurudzira kusiya nzvimbo. Kuenda kubva pakutenga kusvika pakutengesa. Kunyanya zvine chekuita nekugara kwehotera nemasangano ekufambisa, ayo ari zvikamu zvinonyanya kukudziridza tsika yakaderera mumwedzi iri kuuya. Kunyangwe paine misangano inokwanisika iyo mitengo yavo inogona kusangana uye iyo inogona kutsausa vanopfuura mumwe investor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Maitiro: izvo zvikuru zvinoshamisa paunodzoka kubva kuzororo